Ball saa'idka, Motor saa'idka, saa'idka saaraha, saa'idka Good Tayada - Anrui
jeexdin Deep saa'idka kubada
saa'idka rullaluistemadka tapered
saa'idka kale kartoo
Gudbinayeen saa'idka qalabka
saa'idka qalabka guriga
Anrui Holding Co. Group, Ltd., Waa shirkad koox ku lug saa'idka jeestay, daaweynta kulaylka, shiidi iyo shirka iyo sidoo kale saa'idka shiidi saarka mashiinka la noo brand gaar WWI. Sida xirfadle saa'idka kubada jeexdin qoto dheer soo saaraha, aan xakameeyo oo tayo leh ka qalab, habka wax soo saarka si ay ugu dambaysta. saa'idka WWI si ballaaran loo isticmaalo motor, motor-gaari, nidaamka conveyor, wiishka iyo escalator, qalabka guriga, motor nuclear iyo iwm si ay u sameeyaan dunida kalsoonaan karo isku shaandheyn.
Waxaan ku siin damaanad tayada 1 sano ka yar xaaladaha shaqada ee caadiga ah. Kaliya haddii la guuldareystay sababa sita tayada sanadkii, WWI jeclaan lahaa inuu bedelo dhalista ku guuldareysatay dhalista cusub mid ka mid ah.
Our Factory ayaa koray galay Premier ISO / TS16949: 2009 saaraha Certified ah ee tayada sare, waxyaabaha kharash-ool ah
WWI waa soo saaraha saa'idka xirfadeed. gebi Waxaan leenahay 6 warshadood oo ku yaalla Huangshan, Hangzhou, Hubei siday u kala horreeyaan.
Anrui Holding Co. Group, Ltd.